TAAGEERADA - Beijing Convista Flow Control Qalabka Co., Ltd.
CONVISTA ma aha oo kaliya inay bixiso la-talin farsamo oo loogu talagalay xalinta xakamaynta qulqulka marxaladda ugu horreysa, sidoo kale waxay u qabataa shaqo dukumiinti xirfadeed u leh mashruuca oo dhan.
Shaqada kadib, kooxda adeegga injineernimada ee CONVISTA waxay ku siin karaan jawaabta waqtigooda baahida macaamiisha adduunka oo dhan: markhaati iyo taageero farsamo oo ku saabsan hawlgelinta iyo bilowga marxaladda, dayactirka ayaa la xiray kormeerka, cilad bixinta iyo adeegga dayactirka, xulashada qalabka, dayactirka iyo tababarka hawlgalka.
1．Salamo la bixinayo
Himilada kama dambaysta ah ee 'CONVISTA' waa in la siiyo xalal lagu xakamayn karo qulqulka wershadaha kala duwan ee ka soo horjeedda shuruudaha mashruucyada kala duwan
Sidee lagu gaaraa?
Step1: Kooxdayada injineernimada waxay, marka hore, si qoto dheer u lafa guri doonaan mashruuca 'xaaladaha adeegyadiisa, qeexitaanada farsamo iyo wixii la halmaala, sidaa awgeed waxay dejin doonaan qiimeyn habboon;
Step2: Laantayada ganacsigeenu waxay qiimeyn doonaan macaamiisha 'shuruudaha gaarka ah & ganacsiga waxayna uga jawaabi doonaan si waafaqsan maamulaha iibka;
Step3: Iyadoo lagu saleynayo xogta kor ku xusan, injineeradeenu waxay dooran doonaan nooca saxda ah, maaddada saxda ah, qalabka saxda saxda ah & fureyaasha ku shaqeeya ee ku habboon shuruudaha mashaariicda, iyo sidoo kale, macaamilka macaashkiisa, keydinta kharashka ayaa sidoo kale noqon doonta mid ka mid ah tixgelintooda.
Step4: Kooxda ganacsigu waxay ka shaqeyn doonaan xalka ugu habboon, waxay u diri karaan xigashooyin farsamo & xigasho ganacsi macaamiisha E-mailada.
2． Hubinta tayada & Xakamaynta Tayada
Dhammaan warshadaha ay oggolaatay CONVISTA maahan inay haystaan ​​oo keliya dhammaan oggolaanshaha waaweyn, oo ay ku jiraan ISO9001, API 6D, API 6A, CE / PED, HSE, API 607 ​​/ API 6Fa Fire safe certificate,
laakiin sidoo kale, waa inuu leeyahay nidaamka xakamaynta oo dhameystiran laga bilaabo alaabta ceeriin ilaa alaabada la dhammeeyay. Shaqaalaha iyo Xakamaynta Tayada Gudaha ee wershaddu waa inay noqdaan kuwo aqoon sare leh si loo fuliyo tijaabada garaafka Raadiyaha, Imtixaanka Ultra-sonic, Dye Penetrate, Qaybaha Magnetic, Aqoonsiga Maqaalka Wanaagsan (PMI), Imtixaanka Saameynta, Tijaabada Sinta, Tijaabada adag , Tijaabada Cryogenic, Vacuum test, Imtixaanka qiiqa oo baxsad ah oo hooseeya, tijaabada gaaska cadaadiska sare, baaritaanka heerkulka sare iyo baaritaanka Hydro-static.
3．Raadin, Horumar iyo Hal-abuur
CONVISTA waxay leedahay khibrad ballaaran oo ku saabsan naqshadeynta qalabka, oo ay weheliso nidaamyada isku-dhafan ee CAD / CAM (Solid Works) nidaamyada si buuxda uga faa'iideysta fursadaha hal-abuurka iyo xallinta injineernimada tartanka iyadoo la hubinayo u hoggaansanaanta dhammaan heerarka la xiriira.
CONVISTA waxay si gaar ah ugu fiicneyd soo saarista naqshadaha cusub ee filtarka waaweyn ee loogu talagalay adeegga cadaadiska sarreeya iyo heerkulka, Cryogenic valves Corrosion valves valves iyo alaabada sida gaarka loo farsameeyay ee loogu talagalay adeegyada gaarka ah.